Boorana: Utuma isaan jiranii uummata keenya waraanaa jiruu - BBC News Afaan Oromoo
Boorana: Utuma isaan jiranii uummata keenya waraanaa jiruu
Dilbata Godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo ganda naannoo Somaalee waliin daanga'utti haleellaa jiraattootni naannichaa poolisii addaa naannoo Somaaleen rawwatame jedhaniin lubbuun namoota 6 darbuu fi 20 kan ta'an miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan irra gahuu ibsame.
Jiraataan aanichaa barataa Yunivarsiitii Walayitaa Soddoo waggaa 1 ffaa ta'ee fi maati isaa bira boqonnaaf deeme, Didoo Waariyoo rasaasan rukutamee Hospitaala Negelleetti waldhaanamaa akka jiru BBCtti himeera.
Erga walitti dhukaasuun eegalamee guyyoonni sadii darbuu kan himu Diidoon, ''dhukaasa dilbata banameeniin rukutame'' jedha.
''Waraanaa ganama sa'aa tokkotti dhufanii uummataa nagaa jiru irratti bananii hanga sa'aa toorbaatti walitti dhukaasuutu ture'' jedha Hospitaal Negellee Dilbata sa'aa booda waldhaansaaf kan gale Diidoon.
Namni rasaasaan dhahamee hedduu dha kan jedhu Dargaggoon kun ''namoota rasaasaan rukutaman keessaa reeffa nama jahaa argeera, namni madaawe ammoo 20 ta'aa'' nuun jedhe.
Akka Diidoon jedhutti hidhattoota huccuu irraaf jalaan walfakkaatu uffatan, meeshaa waraanaa jajjaboo qabataniifi baayyin isaanii dhibbaan lakkaawamutu dhukaase miilla isaa rasaasaan rukute.
''Kunniin liyyuu poolisii Somaaleedha dha'' jedha.
Diidoon miseensonni poolisii addaa naannoo Somaalee lakkofsaan hedduu akka turanis dubbata.
Diidoon Hospitaal Negeelletti rasaasni gudeeda seente baafamteefi natti furaa jira jedha.
Hospitaal Negellee namni madaawee dhufe nama 16 akka ta'aniifi Hospitaala isaaniitti namni du'es ta'e reeffi dhufe akka hin jirre kan himan ammoo meedikaal Daayireektara Hospitaala Negellee Dr. Nuuree Areerooti.
''Sanbata duraa namni shan dhufanii Dilbata ammoo madoon 11 dhufaniiru'' kan jedhan Dr. Nuureen, namoota madaawanii keessaa tokko haalaa gaariirra hin jiruu jedhan.
Namoonni lamas waldhaansa lafeef gara Hospitaal birootti rifeeriin ergamuu isaanii himaniiru.
Aanichi amma haala maalii keessa jira jennee bulchaa aanaa Gumii Eldalloo gaafachuuf bilbillus bilbilli nuu bahuu hin dandeenye.
Aana ollaa, aanaa Liibanitti bilbillee, Bulchaa aanichaa Obbo Waariyoo Goolicha argannee wayita dubbifnu, kaleessa sa'aa booda aanaa Gumii eldalloo daawwatanii haalichi tasgabbaa'aa jiraachuu nutti himan.
Bilbilli naannoo sani akka hin baaneefi haalli akkasii aanaa isinatti yeroo hedduu akka mudate yaadatanii haleellaan kun miseensota poolsii addaatiin akka raawwatamee, shakkii akka hin qabne himan.
''uffati isaanii irraa jala walfakkaata, kopheen isaanii tokkuma, toftaan loltummaa isaaniis shaakala akka qaban agarsiisa, meeshaaleen hidhatanis meeshaalee waraanaa gurguddoo dha kanaan poolisii addaa somaalee akka ta'an beekna'' jedhan obbo Waariyoon.
Qaamolee meeshalee ammayyaa hidhachuun isaan miidhuu dhufan horsiisee bulaan aanichaa aanuma qabuun ofirraa dhowwuuf yaalus himaniiru.
Bakka haleellaan kun qaaqabetti qaamni nageenya mootummaa hin turre, walitti dhukaasa sa'aatii 7 oliif tureen booda qaamoleen haleellaa raawwachuu dhufan konkolaataan gara dhufanitti deebi'uu isaanii hordofee amma faarri tasgabbii jiraachuus nutti himaniiru.
Hawaasni somaalee naannoo daangaa Oromiyaa, Godina Booranaa jiran gama isaaniin lafa isaaniirraa buqqaa'aa fi ajjeefamaa akka jiran tajaajila Afaan somaaleetti himaniiru.
Maddi rakkoo kanaa saamicha lafaati jedhu. ''Moyaleen lafa murteessaa dha. Bakka daangaati. Lafti daangaa naannolee lameeniirra jiru hundi kan naannoo Somaaleeti, Dolow, Jigjigaa, Diree Dawaa fi Moyyalee dabalatee. Moyyalee fudhatanii to'achuun biyyoota ollaatti siiquu waan fedhaniif nu ajjeesu'' jedhu dhalataan naannoo Somaalee tokko.
Ministirri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad pireezidantii Eertiraa daawwanaaf as turan ganama kan erga gaggeesanii booda ibsa kennaniin naannolee daangaa naannoo somalee Itoophiyaa fi Oromiyaa akkasumsa nannoolee biro jeequuf qaamota yaalii taasisaniin hojii jeequmsaa isaanirraa akka of qusatan gaafataniiru ejjeennoon akka fudhatamus ibsaniiru.
'Naannolee daangaa Oromiyaa fi Somaalee gidduutti lubbuun namaa [akka baalaatti] harca'aa jira,' kan jedhan Dr. Abiyyi, Poolisii Fedeeraalaa fi Raayyaan Ittisa Biyyaa 'Sa'aatii ammaarraa eegalee namootaa fi gareewwan uummatoota walitti buusan, lubbuun namaa akka darbu godhan, yookaan gargaaran gara seeraatti dhiyeessaa,'' jedhaniiru.
Mootummoonni Naannoo Somaalee fi Oromiyaa dhimma kana waliin ta'anii akka furanis ajajaja dabaraasaniiru.
Ibsa ministira muummee hordofees Pireezidantiin Naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaale daangaa nannolee lameenii irratti humnoonni nageenyaa mootummaa federaala akka gidduu galanii tasgabbii uuman waliigalaniiru.
Ministirri muummee fi Pireezidantootni naannolee lameenii gidduu galummaa qaamolee nageenyaa mootummaa federaalaa haa hayyaman malee jiraattotni naannoo waldhabdeen kun itti baayyatuu jijjiirmni ni dhufa abdii jedhu waan qaban hin fakkaatan.
Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Godina Booranaa Obbo Galma Boruu guyyoota darban keessa aanaalee shan Godina booranaaf naannoo Somaalee daangessan keessatti lolli uummata irratti banamee lubbuun darbee fi miidhamni qaqqabe hedduu ta'uu himan.
''Raayyan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa Moyyaale keessa jira. jiraachuun isaa homaa waan fayyade hin qabu'' jedhan.
Bu'aan uummataa buusan osoo jiraatee uummata keenya lubbuu baraaruudha, qabeeny uummata keenyaa akka hin banne tolchuudha garuu hanga aammatti lubbuu uummata keenya bayyanachiisuu hin dandenye, badii qabeenya uummataa hambisuu hin dandeenye'' jedhan.
''Utuma isaan jiranii uummata keenya waraanaa jiruus'' jedhan.
Walitti bu'insa Oromiyaa fi Somaalee: Cinaaksanitti 'namoonni 22 lubbuu dhaban'
Erga pireezindaantonni naannoolee lamaanii Dilbata dabre nagaan akka bu'u ni hojjenna jedhanii booda, Aanaa Cinaaksan qofa keessatti namoonni 22 ajjeefaman
21 Fuulbaana 2017
"Oromoon bilisa baheera, amma kan barbaachisu misooma"
Ministirri Muummee Abiy Ahimad gaaffiwwan miseensoota paarlaamaa irraa dhiyaataniif yoo deebisan, qaamolee biyya diiguuf socho'aa jiru ittiin jedhan akeekkachiisanii jiru.
KALLATTIIN Itoophiyaatti lakkoofsi namoota Covid-19n qabamanii 6,666 gahe
Hanga yoonaa qorannoon koronaavaayirasii Itoophiyaatti taasifame 266,323 kan gahe yoo ta'u, kana keessaa namoota 6,666 irratti argamuun isaa mirkanaa'eera.
Lakkoofsi namoota ajjeechaa Haacaaluun shakkamanii to'ataman 14 gahe
Lakkoofsi namoota ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaan shakkamanii 14 gahu Abbaan Alangee Federaalaa Adaanach Abeebee himan.
''Haacaaluun gaafan du'u Ambotti na awwaalaa jedhee ture''
Sirni awwaalchaa artisti Haacaaluu Hundeessaa iddoo dhaloota isaa magaalaa Ambootti raawwataa jira.
Obbo Dajanee Xaafaafi Kol. Gammachuu Ayyaanaa to'annoo jala oolan
'Sirni durii sun guutuumaan haqamu malee jijjiramnii dhugaa hin dhufu'
Tiraampi dhimma Somaaliyaafi Ilhaan duula filannoorratti maaliif kaasan?
'Falli jiru anga'oonniifi mormitoonni walitti fufinsaan mari'achuudha'